Mitombo isa ireo sitrana Tena mahay ny mpitsabo Malagasy
Tsy nahitana tranga vaovao omaly, ka mijanona ho 106 ny olona mitondra ny coronavirus eto Madagasikara, araka ny tatitry ny Mpitondra tenin’ny CCO Covid-19 Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle.
Nisy iray sitrana kosa ny andron’ny paska, ka 21 izany no efa sitrana, ary 85 kosa no mbola manaraka fitsaboana. Tsy misy ny marary ahitana fahasoratana be ho an’ny omaly. Efa ho iray volana nisian'ny Covid 19 isika. Tsy misy maty na dia nisy efa nanao krizy be sempotra sy nampiasana “respirateur artificiel” aza teto Antananarivo, Toamasina, Fianarantsoa.Mahavita tsara ny asany ny mpitsabo, mpitsabo mpanampy, “urgentiste” na dia eo ihany aza ny tsy fahampian'ny fitaovana. .Nanamafy ny filohan'ny fikambanan'ireo mpitsabo mpananpy ny faran'ny herinandro teo fa misy mpiasan'ny fahasalamana mitaraina hoe na ny fiarovana "masque" hanaovana aza tsy ampy ka ny eo ihany no averina hanaovana. Efa nisy mpiasan'ny fahasalamana voan'ny Covid-19.Hita amin'ny fomba firesak'ireo profesora sy dokotera eo amin'ny TVM fa mahay ry zareo na eo amin’ny fanazavana ara-teknika ny asa na ny serasera. Tsy kabary politika fa tena resaka teknika hamonjena ny ain'ny mpiray tanindrazana Etsy ankilan'izay mandeha ihany koa ny fikarohana ny fanafody, ary ny filoha aza moa dia efa sahy niteny fa eto Madagasikara ny akora mahasitrana ny Coronavirus. Antenaina fa ny mpikaroka sy mampahaizana Malagasy tokoa no hahazo ny fankasitrahana rahatrizay mivoaka amin'ny fomba ofisialy ny fisian'io fanafody io fa tsy sanatria ny vahiny no hidedaka fa mahavita azy.